Home > REPAYMENT > AEON E-Payment Schedule
AEON e-Payment schedule ဆိုသည်မှာ ချေးငွေပြန်လည်ပေးသွင်းရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် လစဉ်ပေးချေမှုဇယား စာအိတ်ကို စာတိုက်မှပေးပို့ခြင်းအစား customer ကိုယ်တိုင် လက်ရှိလစဉ်ပေးချေမှုဇယားကို အချိန်မရွေး online တွင်အလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Link ကို SMS ဖြင့် customer ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းသို့ ပေးပို့သည့် e-Payment schedule အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
AEON မှ customer ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းသို့ ဆိုင်မှချေးငွေရယူပြီး ၁ ပတ်အတွင်း ၁ကြိမ်တည်းသာ SMS link ပေးပို့ပေးပါသည်။ ထို SMS link ကို customer မှ ငွေပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်း ပြီးဆုံးသည်အထိ သိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆိုင်မှ ချေးငွေရယူပြီး တစ်ပတ်ကျော်သည်အထိ SMS Link မရရှိခဲ့ခြင်း (သို့) မှားဖျက်မိခြင်းများ ရှိခဲ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ AEON ၏ Customer Service Hotline 09-969712111 သို့ ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြီး အကြောင်းကြားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
01. ဖုန်း၏ Message Box တွင် ပုံပါအတိုင်း အီရွန် မှ စာတိုရောက်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအတွင်းပါသော Link ကို နှိပ်ပါ။
02. သင့်၏ ချေးငွေပြန်လည်ပေးသွင်းချိန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
03. ရန်ကုန်တွင် ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link ကို နှိပ်ပါ။
3-1. ရန်ကုန်တွင် ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းနိုင်သောနေရာများကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
3-2. ရန်ကုန်တွင် ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းနိုင်သောနေရာများကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
04. မန္တလေးတွင် ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link ကို နှိပ်ပါ။
4-1. မန္တလေးတွင် ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းနိုင်သောနေရာများကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
4-2. မန္တလေးတွင် ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းနိုင်သောနေရာများကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
05. Online မှတဆင့် ချေးငွေကို ပြန်လည်ပေးသွင်းလိုပါက အောက် ဖော်ပြပါ Link ကို နှိပ်ပါ။
5-1. Online မှတဆင့် ချေးငွေ ပြန်လည် ပေးသွင်းနိုင်သောနေရာများကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။